Mbido AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Argentine Emiliano Martinez Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography
Ihe omuma anyi nke Emiliano Martinez na-enye ihe omuma banyere akuko nwata, ndu mbu, ndi nne na nna, ndu ezinulo, ndu ndu (nwunye), umuaka, ezigbo ego na ndu.
N'ebe a, anyị ga-emebi ndụ akụkọ ndụ nke onye na-eche nche site na nwata ruo mgbe ọ bara ọgaranya na ewu ewu.
Emiliano Martinez akụkọ ndụ.
Ee, onye ọ bụla maara banyere njikwa bọl ya dị ukwuu na omume dị jụụ. Agbanyeghị, ọ bụghị ọtụtụ gụrụ akụkọ ndụ Emiliano Martinez nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Na-ebughi n'ihu, ka anyị bido.
Emiliano Martinez Childhood Akụkọ:
Maka ihe ndị na-ebido ihe ndị na-eme eme na mmalite, aha otutu onye na-agba ọsọ bụ “Martininho”. Damián Emiliano Martínez Romero A mụrụ na 2nd ụbọchị Septemba 1992 nne ya, Susana na nna ya, Alberto n'obodo Mar del Plata, Buenos Aires nke Argentina.
Ọ bụrụ na ị hụbeghị ya, lee otu nne na nna Emiliano Martinez - ọ bụghị ọzọ karịa mama ya mara mma n'akụkụ ya, mgbe ọ bụ nwa ọhụrụ.
Foto umuaka nke Emiliano Martinez na nne ya.
Emiliano Martinez Ezinụlọ:
Onye gbara ihe a bupụrụ nwa amaala Argentina. Nsonaazụ nyocha emere iji chọpụta ezinụlọ Martinez na-egosi na ọ bụ agbụrụ ọcha kachasị. Agbụrụ agbụrụ na-achịkwa mpaghara ọwụwa anyanwụ nke Argentina.
O si na mpaghara dị na Argentina ebe agbụrụ ọcha bụ isi.
Emiliano Martinez Na-etolite Afọ:
Martininho, dika aha ya bụ aha ya, tolitere na obodo amụrụ ya na Mar del Plata n'akụkụ nwanne Alejandro?
Onye nchebe anaghị enwe ncheta ncheta banyere oge ọ bụ nwata n'ihi eziokwu na ọ tolitere na ụkọ.
Ma ị nwere ike ijide ya na-amụmụ ọnụ ọchị mgbe ọ bụla ọ na-ekwu maka otu o si malite ịgba bọọlụ na nwata.
Foto nke Throwback nke Emiliano Martinez na nna ya na nwanne ya nwoke nke okenye.
Emiliano Martinez Ezigbo Ezinụlọ:
Ihe mgbaru ọsọ ahụ sitere na ezinụlọ dara ogbenye. Dika odi otua ndi ezinulo ya huru oke nkpuru ego. Ọ hụla ka nna ya na-ebe ákwá n’abalị n’ihi enweghị ike ịkwụ ụgwọ.
Nke a abụghị ihe dị mma nye onye na-eto eto na-eche nche ka ọ hụ na ncheta abalị ahụ siri ike ichefu.
Emiliano Martinez Goalkeeping Akụkọ nke:
O doro anya na nwatakịrị ahụ nwere olileanya ego nke ezinụlọ ya mgbe ọ malitere ịrụ ọrụ bara uru na CA Independiente.
Ọ bụ na klọb ahụ ka ọ na-atụ anya nrọ maka ọdịnihu maka onwe ya na football na ihe ọma niile na-eso ya.
Ọ (aka nri) malitere ọzụzụ na football mgbe ọ dị obere na nwanne ya nwoke.
Afọ ndị mbụ Emiliano Martinez na-arụ na Football:
Ka ọ na-erule oge ịgba egwu bọọlụ bụ afọ iri na isii, ọrụ ya amalitelarị ụzọ ziri ezi. N'ezie, ọ malitere igwu egwu maka Argentina n'okpuru 16s ma otu onye na-ahụ egwu si Arsenal hụrụ ya.
E bugara Martinez na klọb London maka ule ma ọ mere nke ọma ịmasị. Ndị Gunners egbughị oge iji debanye aha ya maka nde £ 1.1 na Club Atletico Independiente nwere obi ụtọ ịhapụ nwa nwere nkà maka ego ahụ.
Emiliano Martinez Biography - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Nwatakịrị ahụ nwere oge siri ike ịbanye na klọb ọhụrụ ya. N'ezie, ọ bụ nwata na-atụ ụjọ nke na-amaghị otu mkpụrụ okwu n'asụsụ Bekee. Ya na ezinụlọ ya nke dị anya na ya, ọ gafere afọ siri ike na klọb.
E kweghị Martinez ka ọ gwuo egwuregwu ọkachamara ọ bụla ruo mgbe ọ gbara afọ 18, enweghị ekele na enweghị akwụkwọ paspọtụ Europe. N'ihi ya, a manyere ya igwu naanị egwuregwu enyi.
Mgbe Martinez mechara nụ ụtọ football nke Bekee, ọ bụ ya na Oxford United ebe e zigara ya na mbinye ego na 2012. Ọ mere ihe izizi ya maka Arsenal n'otu afọ ahụ na otu iko League na Coventry City.
Mgbe nke a gasiri, oru Martinez abughi ihe edere n'ulo. Ọ nọrọ ọtụtụ afọ na klọb dị iche iche na England. Ha gụnyere Sheffield Wednesday, Rotherham United, Wolverhampton Wanderers, Getafe na Readinggụ.
Emiliano Martinez Bio - Bilie Iji Maara Onwe Ya Bio:
“Martininho” enwetabeghị nkwalite na akara mmalite ma ọ ga-eburu obe ịbụ ihe mgbaru ọsọ ndabere.
Ọ bụ ruo mgbe onye nlekọta nhọrọ mbụ Bernd Leno ahọrọ nnukwu mmerụ na June 2020 na Martinez mechara nweta ezigbo ohere. Onweghị onye ga-atụfu ohere ndụ ya niile Martinez weputara ihe ngosi dị egwu maka oge fọdụrụnụ.
N'elu ọnụ ọgụgụ dị egwu ya, ọ zọpụtara ihe dị oke mkpa nke nyere Arsenal aka inweta mmeri nke iri na anọ nke FA.
Martinez egosila na ya kwesiri ka ọ bụrụ onye kwesịrị ntụkwasị obi maka ndị Gunners ma nwee ikike ịrịọ oge egwuregwu ọ bụla ọ ga-enweta.
Ọ nwere ike ịga n'ihu ịlụ ọgụ maka ọnọdụ ya mgbe onye nlekọta mbụ họọrọ gbakere. Kedu otu ọ bụla siri dịịrị ya, ndị ọzọ, dịka ha na-ekwu, ga-abụ akụkọ ihe mere eme.
Nkwado bụ n'ezie omume ọma- IG.
Ọnye na-bụ Emiliano Martinez Wife?
N'ịga na ndụ ịhụnanya nke onye nchebe, ọtụtụ ndị amaghị na ya na Mandinha Martinez nọ na mmekọrịta alụmdi na nwunye.
Amabeghị ọtụtụ ihe banyere mgbe lovebirds zutere ma bido ịkpa, mana anyị maara na ha ghọrọ di na nwunye na 2016.
Ọnye na-bụ Emiliano Martinez Children?
Nwunye Emiliano Martinez - Mandinha bụ onye isi na MiSuennos Kids, ndị ọkachamara n'ime ime nwatakịrị. Ọ bụkwa nne nye ụmụ Martinez abụọ. Ha gụnyere nwa nwoke - Santi Emiliano Martinez (amụrụ na 2018) na nwatakịrị ọzọ amụrụ na Eprel 2020.
Emiliano Martinez na nwunye ya Mandinha.
Ndụ Emiliano Martinez:
Ọ bụ eziokwu a na-agbagha agbagha na Ezinụlọ na-abịa tupu na mgbe egwuregwu bọọlụ maka goolu. Ikpe ahụ abụghị ihe dị iche maka profaịlụ anyị nwere mmasị.
Anyị na-ewetara gị akụkọ gbasara nne na nna Emiliano Martinez, ụmụnne ya na ndị ikwu ya.
Banyere Emiliano Martinez Ndị nne na nna:
Susana na Alberto bụ nne na nna bishọp ahụ. Ha abụọ bụ ndị Argentine ma guzoro n'akụkụ ibe ha na ụkọ na ụba.
Karịsịa, ndị nne na nna Emiliano Martinez na-akwado ọrụ ya ma na-eme ihe ọ bụla iji chụọ àjà maka ọganiihu ya.
Foto na-adịghị ahụkebe nke Emiliano Martinez ya na papa ya.
Martinez na-echeta otu oge na agụụ na-agụ mama ya naanị iji hụ na ya na nwanne ya nwere ihe ha ga-eri maka ụbọchị ahụ.
Ya mere, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na onye na-eche nche na-egwuri egwu na ezinụlọ ya n'obi ma ghara ịla azụ ịkọrọ ha akụkọ banyere mmeri ya.
Banyere Emiliano Martinez ụmụnne:
Ebumnuche ahụ tolitere na nwanne nwoke a ma ama bụ Alejandro. Ọ naghị ekwukarị banyere nwanne anyị tụkwasịrị obi ịbụ otu n'ime ndị kachasị egwu ya. Ileba anya na peeji nke Alejandro Instagram na-ekpughe na o nwere mmasị na ụgbọ ala na ịgba ọsọ.
Emiliano Martinez na nwanne ya nwoke Alejandro na-ekpori ndụ.
Banyere ndị Emiliano Martinez:
Ewezuga ezinulo nke onye goalie, amaghi ihe banyere nna nna ya karia ka o metutara nne na nna ya na nna nna ya.
Na mgbakwunye, amabeghị ọtụtụ ihe gbasara nwanne nna nna Martinez, nwanne nna ya, nwanne nne ya, ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanne ya.
Emiliano Martinez Ndụ Nke Onwe:
Ọnye na-bụ “Martininho” na mpụga ụwa bọọlụ? kedu udiri agwa ya?
O nwere ndụ n'èzí guzo n'etiti osisi na-adọta nnukwu nchekwa? Iji malite Martinez persona, ọ bụ onye dị jụụ, onye na-ahụ n'anya na-enwe mmetụta uche ma na-emeghe ikpughe eziokwu banyere ndụ ya na nke onwe ya.
Kedu ihe ọzọ? ọ nwere nchekwube na-emetụta ndụ ma mara etu esi etinye oge ya dị ka ọtụtụ ndị amụrụ n'okpuru Virgo Zodiac Sign.
Dika itinye ezigbo oge na ezi na ulo ndi enyi Martinez nwere mmasị na ikiri ihe nkiri, ime njem, Keepnọgide na-agba ọsọ egwuregwu, igwu egwuregwu tennis n'etiti ihe ndị ọzọ na ntụrụndụ.
Playgba tennis bụ otu n'ime ihe omume ntụrụndụ ya.
Web site Emiliano Martinez:
Vingga n'ihu na otu goalie si eme ma mefu ego ya. Goalie nwekwara ego na-akwụ ụgwọ site na endorsements.
Dị ka nke a, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya ịhụ ya dị oke ọnụ Corvette na Mercedez ka ha na-adọba ụgbọala na ụgbọala nke ụlọ London.
Chefuo mmadu na anu ulo. na ụgbọ ala bụ uru a uba.
Emiliano Martinez Net bara uru:
You maara na o nwere ihe ruru nde 1.5 nde Euro dịka nke June 2020? Ọ bụ ihe nzuzo na-emeghe na ọ kpatara ọtụtụ akụ na ụba ahụ site na ụgwọ na ụgwọ ọ na-enweta maka ịgba bọl.
Emiliano Martinez Eziokwu:
Iji kechie akwụkwọ ndụ anyị, bụ nke amachaghị ma ọ bụ ọtụtụ eziokwu banyere Onyenchekwaebumnobi nke Argentina.
Eziokwu # 1 - N'iji ego ya na nwoke nkịtị tụnyere:
Nweta ego na Peso Argentine ($)
Kwa Afọ £ 1,040,000 € 1,154,140 $ 1,361,308 $ 100,175,184
kwa ọnwa £ 86,666 € 96,178 $ 113,442 $ 8,347,932
Kwa Izu £ 20,000 € 22,195 $ 26,179 $ 1,923,486
Kwa .bọchị £ 2,849 € 3,162 $ 3,729 $ 274,784
Kwa elekere £ 118 € 131 $ 155 $ 11,499
Kwa Nkeji £ 1.98 € 2.20 $ 2.60 $ 190.8
Kwa nke abụọ £ 0.03 € 0.04 $ 0.05 $ 3.2
Onu ogugu mmadu no na Argentina ga-aru oru ma o pekata mpe afo iri na onwa ise iji mee Peso Argentine 10. Nke a yiri nke Emiliano na-akwụ ụgwọ kwa afọ na Arsenal (5 stats).
Nke a bụ ihe
eritela uru kemgbe ị malitere ile Peeji a.
Eziokwu # 2 - Anu ulo:
Martinez buru ibu na anụ ụlọ karịsịa nkịta. O yiri ka ya na nkịta na-azụ n'ubi ha na-acha akwụkwọ ndụ ma na-ewere foto ndị kwesịrị ekwesị nke Instagram na anụ ụlọ ha. Otu n’ime foto ndị ahụ sere nkịta ahụ nwere uwe aka.
Lee goalị na Nkịta ya.
Eziokwu # 3 - FIFA 2020 Rating:
Martinez enweghị ọkwa FIFA n'ozuzu ya nke isi iri asaa na ise nwere ike iteghete 75. Aghọtara na goalie ahụ tara ahụhụ na enweghị egwuregwu dịka nwanne ya nwoke na onye obodo ahụ. Sergio Romero.
Site na ntinye ya na atụmanya ya nke na-adịbeghị anya, ndị Fans enweghị nchekasị na ọkwa ya ga-aka mma n'oge na-adịghị anya.
A na-enwe mmalite dị umeala mgbe niile ma anyị nwere ike ịtụ anya karịa maka goolu a.
You maara na Goalie na-emekọrịta otu ụbọchị ọmụmụ ya -1992 na ọtụtụ ndị ama ama na-abụghị egwuregwu? ha gụnyere Selena Gomez, Cardi B, Miley Cyrus na Demi Lovato.
N’afọ ahụ, emere emere asọmpi Olympic nke oge okpomọkụ na Barcelona Spain ebe a na-eme egwuregwu Olimpik Oge Oru na Albertville, France.
Emiliano Martinez ka ga-esonye na otu okpukpe. Dika odi otua, apughi ikwuputa ya ma obu onye kwere ekwe ma obu na o bughi.
Mana nsogbu ndị ahụ na-akwado eziokwu ahụ bụ na nne na nna Emiliano Martinez zụlitere ya Onye Kraịst.
Aha n'uju Damián Emiliano Martínez Romero
aha otutu "Martininho"
Ụbọchị ọmụmụ Daybọchị 2nd nke Septemba 1992
Ebe amụrụ onye Buenos Aires nke Argentina
Egwuru egwu ọnọdụ Onye na-eche nche
Ndị nne na nna Alberto (papa) Susana (mama).
Nne Alejandro (nwanne).
Nwunye Mandinha Martinez kwuru
Children Santi Molezún Martinez na otu onye.
Ngwakọta Net Nde Euro 1.5
omume ntụrụndụ Ikiri ihe nkiri, ije ije, Keepnọgide na-asọ mpi, na-akụ tebụl tebụl.
elu 6 ụkwụ, iri na otu.
Daalụ maka iwepụta oge iji gụọ edemede a gbasara ndụ njem nke Onyenchekwaebumnobi Argentine. Anyị kwenyere na akụkọ Emiliano Martinez nke nwata mere ka ị kwenye na ndidi na nnọgidesi ike na-emeri ihe niile.
Na Lifebogger anyị jiri mpako na-ebugara akụkọ ndụ anyị na izi ezi. Ọ bụrụ n’ịhụta ihe ọ bụla na esemokwu a na Emiliano, biko kpọtụrụ anyị ma ọ bụ hapụ nkọwa n'okpuru.